सबैभन्दा बढी कमाउने विश्वका १० प्रमुख मोडल - USNEPALNEWS.COM
- यूस नेपाल न्युज संवाददाता प्रकाशित मिति: July 14, 2016
१.)गिसेल बुण्डचेन: विश्वप्रसिद्ध फोब्र्स पत्रिकाका अनुसार सन् २०१५ मा मोडलिङको संसारमा सबैभन्दा बढी दाम कमाउनेमा ब्राजिलकी मोडल गिसेल बुण्डचेन हुन् । उनले गत वर्ष फेशन मोडलिङबाट चार करोड ४० लाख डलर अर्थात् चार अर्ब ६६ करोड रुपियाँभन्दा बढी कमाईन् । यो रकम सन् २०१४ मा उनले गरेको कमाइभन्दा केही कम नै छ , गत वर्ष उनको कमाई चार करोड ७० लाख डलर थियो । ३५ वर्षीया विवाहित यी ब्राजिलियन मोडलको दुईवटा बच्चा छन् ।
२.) कारा डेलिभिन्न: सन् २०१५ मा काराले मोडलिङबाट ९० लाख डलर अर्थात् साढे नब्बे करोड रुपियाँ कमाइन् । सन् २०१४ मा काराको आय ३५ लाख डलर मात्र भएकोमा सन् २०१५ मा ९० लाख पुगेको बताईएको छ । बेलायती नागरिक काराले सन् २००९ देखि मोडलिङलाई आफ्नो क्यारियर बनाएकी थिइन् ।
३.) एड्र्निा लिमा: सन् २०१५ मा ९० लाख डलर नै कमाएर एड्र्निा पनि सबैभन्दा बढी कमाउने मोडलको दोस्रो स्थानमा छिन् । ३४ बर्षीया यी मोडल पनि ब्राजिलकै हुन् । दुई बच्चाकी आमा एड्र्निा १५ वर्षकै उमेरदेखि मोडलिङको क्षेत्रमा कार्यरत छिन् र यिनी विशेष गरेर भिक्टोरियाज सेक्रेटस् भन्ने महिलाले लगाउने भित्री वस्त्रका लागि नामी छिन् ।
४.)डाउट्सेन क्रोइस: ३१ वर्षीया डच मोडल डाउट्सेन क्रोइसको आम्दानी वर्ष २०१५ मा ७५ लाख डलर अर्थात् झण्डै ८० करोड रुपियाँ थियो र फोब्र्स धनी मोडल सूचीमा उनी तेस्रो स्थानमा छिन् । फ्रान्सको सौन्दर्य प्रसाधन ब्राण्ड लोरियालकी अनुहार भनेर चिनिने ३१ वर्षीया क्रोईस आम्सटरड्याम तथा न्यूयोर्कमा बसेर काम गर्दछिन् । सन् २००३ देखि मोडलिङमा सक्रिय यी डच मोडलको पनि दुईवटा बच्चा छन् ।
५.) नतालिया भोडियानोभा: ७० लाख डलर अर्थात् ७० करोड रुपियाँ भन्दा बढीको कमाईसहित रुसी मोडल चौथो स्थानमा छिन् । मोडलिङका साथै कहिँलेकाहीँ फिल्ममा समेत अभिनय गर्ने यी रुसी सुन्दरी १५ वर्षको उमेरदेखि नै यो क्षेत्रमा छिन् र उनका चारवटा बच्चाहरु छन् । नतालिया विशेष गरि सुगन्धित सौन्दर्य प्रसाधनहरुमा बढी देखापर्छिन् ।
६.) मिरिण्डा केर: अष्ट्र्ेलियन मोडल मिरिण्डा केरको आम्दानी सन् २०१५ मा ५५ लाख डलर अर्थात् ५८ करोड रुपियाँ थियो । विभिन्न सौन्दर्य सामाग्रीहरुको मोडलिङमा देखिने ३३ वर्षीया केर झण्डै १० वर्षदेखि यस क्षेत्रमा रमार्ईरहेकी छिन् । हलिउड कलाकार ओर्लाण्डो ब्लुमसँग सम्बन्धविच्छेद गरेकी केरको एक बच्चा समेत छ ।
७.) जोन स्मालस्: सन् २०१४ मा तीस लाख डलर मात्र कमाएकी मोडल जोनले सन् २०१५ मा झण्डै दोब्बर अर्थात् ५५ लाख डलर आय आर्जन गर्न सफल भइन् । काल्भिन क्लेन, जोई फ्रेस, मार्क ज्याकोब्स् जस्ता विश्वप्रसिद्ध ब्राण्डहरु हात पार्न सफल भएकी जोन २७ वर्षकी छिन् र प्यूर्टो रिको नामक देशकी बासिन्दा हुन् ।
८.) लारा स्टोन: सन् २०१४ मा मोडलिङबाट टाढिएकी लाराका लागि वर्ष २०१५ निकै लाभदायक सिद्ध भयो र उनी पूनः बढी कमाउने मोडलहरुको सूचीमा पर्न सफल भइन् । काल्भिन क्लेन अण्डरवेयर लगायत लोरियाल जस्ता प्रसिद्ध ब्राण्डहरुको मोडलिङमा व्यस्त ३२ वर्षीया लाराको पनि एक बच्चा छ । उनले सन् २०१५ मा ५० लाख डलर अर्थात् ५० करोडभन्दा बढी रकम कमाएकी थिइन् ।
९.) अलेक्जेण्ड्र अम्ब्रोसियो: सन् २०१५ मा यी ब्राजिलियन मोडलको आय ५० लाख डलर अर्थात् ५० करोड रुपियाँभन्दा बढी थियो । यिनले विशेष गरि भिक्टोरियाज सेक्रेट्सकै मोडलिङ गरेर मोटो रकम हात पार्न सफल भएकी हुन् । ३५ वर्षीया अलेक्जेण्ड्रका दुई बच्चा छन् र विगत १७ वर्षदेखि मोडलिङको क्षेत्रमा स्थापित छिन् ।
१०.) क्याण्डिस स्वानेपोईल: २७ वर्षीया दक्षिण अफ्रिकी मोडल क्याण्डिस ५० लाख डलर अर्थात् ५३ करोड रुपियाँ आम्दानीसहित सन् २०१५ को शीर्ष दस कमाउ मोडलमा परेकी छिन् । १३ वर्ष लामो मोडलिङ क्यारियरमा क्याण्डिसले भिक्टोरियाज सेक्रेट्स लगायत विभिन्न नामी कम्पनीका लागि काम गरेकी छिन् , सन् २०१४ मा उनको आम्दानी ३० लाख डलरमात्र थियो ।